Moosend: Zvese Zvekushambadzira Zvemagetsi Zvivakwa Kuvaka, Kuyedza, Kuongorora, uye Kukura Bhizinesi Rako | Martech Zone
Chimwe chinhu chinonakidza cheindasitiri yangu kuenderera mberi kwehunyanzvi uye kudonha kunoshamisa mumutengo wepamusoro-soro kushambadzira otomatiki mapuratifomu. Iko mabhizinesi akamboshandisa mazana ezviuru zvemadhora (uye achiri kuita) epuratifomu huru… izvozvi mitengo yakadonha zvakanyanya nepo maratidziro achiramba achivandudza.
Isu takanga tichangoshanda nekambani yekuzadzisa fashoni kambani yaive yakagadzirira kusaina kondirakiti yepuratifomu yaizovadhurira kudarika hafu yemiriyoni yemadhora uye takavayambira pamusoro pazvo. Nepo chikuva chaive nezvose zvinotyisa, kusanganisa kugona, uye rutsigiro rwepasi rese ... bhizinesi raive richangotanga, rakanga risina kana zita, uye raingotengesa mukati meUnited States.
Kunyangwe ingangove iri mhinduro yechinguvana yekuvaka bhizinesi ravo, takavawanira mhinduro pachikamu chemutengo icho chingazotora simba shoma kuita. Izvi zvaizobatsira kubuda kwemari mubhizinesi, kuvabatsira kuti vatarise pakuvaka mhando yavo, uye kuvabatsira kuti vawedzere mari… vasina kuparara. Pasina mubvunzo kutaura, varimi vavo vaifara.
Moosend: Email Kushambadzira uye Kushambadzira Kushandisa
Kune avhareji bhizinesi arikutsvaga kuisa inotungamira chizvarwa, nyore kuvaka uye kutsikisa maemail, uye kumisikidza kumwe kushambadzira otomatiki nzendo, uye kuyera kukanganisa ... iwe unowana zvese zvaunoda mukati Moosend.
Ipuratifomu inouya isati yagara nevanhu mazana ekuteerera, akanaka maemaema matemplate uye zvese otomatiki zvaunoda kuti utange mumaawa pane mwedzi.
Moosend: Dhonza uye Donhedza Email Inovaka
Moosend's nyore-kushandisa-dhonza & kudonhedza mupepeti inobatsira chero munhu kugadzira ehunyanzvi matsamba anotaridzika akanaka pane chero chishandiso, ine zero HTML ruzivo. Nemazana e-kusvika-kudhara matemplate aunosarudza kubva, ako email makwikwi ekushambadzira anozove akapfekedzwa kubudirira.
Moosend: Kushambadzira Kwekushambadzira Workflows
Moosend inobatsira iwe kugadzira yakasarudzika yekushambadzira otomatiki workflows iyo inotyaira kutendeuka mitengo Uye ivo vanopa dzinoverengeka dzakagadzirira-dzakagadzirwa Recipes kuti utange… kusanganisira:
Mushandisi Onboarding Automation
Tungamira Scoring Automation
VIP Kupa Zvekushandisa
Imwe neimwe michina inopa zvinokonzeresa, mamiriro, uye zviito zvekuvaka shandura otomatiki otomatiki kana kuvaka yako wega. Yako ane akawanda maratidziro mamiriro, anodzokororwa maemail, chaiwo nguva, uye / kana zvirevo, gadziridza zvimiro, govana workflows, wedzera manotsi, sanganisa nzira uye wongororisa matanho pane chero danho rekufambisa.
Bhurawuza Moosend Mapoka
Moosend: Ecommerce Kubatanidzwa
Moosend ine yemuno kusangana kuMagento, WooCommerce, ThriveCart, PrestaShop, OpenCart, CS-Cart, uye Zen Cart.
Kunze kweyakajairwa e-commerce otomatiki senge yakasiya ngoro yekutengera mafashama ekushanda, ivo zvakare vanopa ekunze-based kurudziro, yakasarudzika chigadzirwa kurudziro, uye AI-inotyairwa chigadzirwa zvigadzirwa. Iwe unogona zvakare kugovera vateereri vako nekuvimbika kwevatengi, kutenga kwekupedzisira, mukana wekutengazve, kana mukana wekushandisa coupon.
Moosend: Kumhara Peji uye Vavaki veFomu
Sezvakaita neyake email muvaki, Moosend inopa kudhonza & kudonhedza yakasanganiswa kumhara peji muvaki uyo ane ese mafomu uye kuteedzera iwe waunotarisira kuti aite zvinhu zvive nyore. Kana, kana iwe uchida kuisa fomu pane yako wega saiti, ingo kuvaka uye kuiisa.
Unogona kucherechedza tarisiro yako yekufambira mberi mune chaiyo-nguva - kuteedzera kunovhura, kudzvanya, kugovana munharaunda, uye kusazvinyora.
Moosend: Dhata-Inotungamirwa Kugadziriswa
Kuita kwako ndeimwe yeaya anowanzo shandiswa zvakanyanya mukutengesa otomatiki. Moosend Personalization haingogadzirise tsika dzakajairwa mukati meiyo email zvemukati, unogona zvakare kusanganisa mamiriro ekunze-akavakirwa, zvigadzirwa zvakagadzirwa pamwe nekuisa huchenjeri hwekushandisa nekukurudzira zvigadzirwa zvinoenderana nehunhu hwevashanyi vako uye mukana wavo wekutenga. Chikamu pakati peMoosend chinowedzerawo kupfuura maemail, mapeji ekumhara, uye mafomu.
Moosend ine API inoshamisa yakasimba, inopa fomu rekunyoresa reWordPress, rinogona kushandiswa kuburikidza neSMTP, ine Zapier plugin, uye toni yeimwe CMS, CRM, Rondedzero Yekusimbisa, Ecommerce, uye Yekutungamira Kubatanidza kusangana.
Bhalisa kune Moosend mahara
Kuzivisa: Ini ndiri mubatanidzwa we Moosend uye ndiri kushandisa zvakabatana zvinongedzo mukati meichi chinyorwa.
Tags: yakasiya ngoro yekutengerakushandisa michinaCS-Cartvatengi kuvimbika maemaildhonza uye udonhedze mupepetiecommerce kushandisa michinaecommerce kushambadziraemail muvakiEmail Marketingemail kushambadza chikuvaemail service providerkunyanyafomu muvakikumhara peji mupepetiMagentomarketing automationkushambadzira workflowsMoosendopencartPrestashopThriveCartwoocommercemafambiro ekufambisaZen yekutengera